सदाबहार जीवन बीमा – – नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स
बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा थप/घट :
वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा : बीमाशुल्क दरमा १ प्रतिशत छुट ।
अर्ध-वार्षिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा : छुट छैन ।
त्रैमासिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा : बीमाशुल्क दरमा १ प्रतिशत थप ।
मासिक बीमाशुल्क भुक्तानीमा : बीमाशुल्क दरमा १.५ प्रतिशत थप ।
सदाबहार जीवन बीमासँग लिन सकिने ऐच्छिक सुविधाहरु र तिनका दरहरुः
ADB दुर्घटना लाभ रू. १/— प्रति हजार
ADB/PTD/PWD : (दुर्घटना/अपाङ्ग/अशक्त लाभ) रू. २/— प्रति हजार
More Products from आजीवन बीमा